Pkg2appimage: Sidee loo dhisaa faylalkayaga AppImage? | Laga soo bilaabo Linux
Caadi ahaan waa wax iska caadi ah, adeegsadayaal badan Nidaamyada hawlgalka oo bilaash ah oo furan, Gaar ahaan GNU / Linux, noocyadeeda kala duwan qaababka Qaybinta (Distros), oo doonaya in lagu rakibo codsi gaar ah oo dibedda ah, oo aan awoodin in la sameeyo, maadaama aysan la jaanqaadi karin annaga GNU / Linux Distro ama nambarkiisa nambarkiisa.
Dhawaan, sida saxda ah tan ayaa igu dhacday aniga, markii aan rabay inaan ka caawiyo saaxiibkey rakibida arjiga Baakad raadsade 7.xx. isaga ku saabsan Debian Distro 10, anigoo isticmaalaya Distro MX Linux 19.1. Kadib baaritaanka iyo tijaabinta, rakibida xirmooyinka dibedda ee kuwa kale Distros (Ubuntu / Debian) iyo samaynaya «Dhacsan»Hoos u dhig) baakadaha iyo maktabadda wareejinta iyadoo la isticmaalayo doorsooma $ LD_LIBRARY_PATH iyo abuurista xiriiriyeyaal calaamadeysan, wax walboo faa'iido ma lahayn, illaa aan aaladda adeegsado Pkg2 dib u eegis.
Way fiicantahay, ugu horreyntii, in la muujiyo qaabka faylka ama farsamada AppImage waxaa iska leh waxa loo yaqaanno "Codsiyada Caalamiga ah ee GNU / Linux". Waxaa ka mid ah qaababka lagu soo daray magacan, marka lagu daro AppImage, way is helaan Flatpak y SNAP. In kastoo, qaar badiyaa ay ku jiraan tiknoolajiyada xirmada ee loo yaqaan OrbitalApps.
1 Waa maxay AppImage?
2 Pkg2appimage: Qalab lagu abuuro barnaamijyada AppImage
2.1 Adeegsiga barnaamijka 'Pkg2appimage'
2.1.1 A.- Tallaabada 1
2.1.2 B.- Tallaabada 2
2.1.3 C.- Tallaabada 3
2.1.4 D.- Tallaabada 4
2.1.5 E.- Tallaabada 5
Waa maxay AppImage?
Sidaa darteed AppImage waa qaab loogu qaybiyo softiweerka la qaadan karo GNU / Linux looma baahna rukhsad superuser si loo rakibo arjiga. Sidan oo kale, si loogu oggolaado loona fududeeyo qaybinta softiweerka, taasi waa ka madax banaan tahay GNU / Linux Distros. Taas oo waxtar badan u leh, kuwa horumariya iyo kuwa isticmaalaba.
"Soo dejiso barnaamij, ka dhig mid la fulin karo, oo socod. Muhiim ma aha in la rakibo. Maktabadaha nidaamka iyo doorbidyada nidaamka lama beddelo. Waxay sidoo kale ku socon kartaa sanduuqa ciidda sida Firejail. U qaybi barnaamijkaaga desktop desktop qaabka AppImage oo ku guuleysta dadka isticmaala dhammaan qeybinnada Linux ee caadiga ah. Hal mar xirxira oo meel walba ordi. Wuxuu ku gaaraa isticmaalayaasha dhammaan qeybsiyada waaweyn ee desktop-ka". https://appimage.org/
AppImage wuxuu leeyahay dukaan codsi "AppImageHub"
AppImageLauncher: si fudud u bilow oo iskudir codsiyada Appimage
Pkg2appimage: Qalab lagu abuuro barnaamijyada AppImage
Sida laga soo xigtay Horumarinta Teknolojiyada AppImage bogga rasmiga ah, waxay si rasmi ah ugu adeegsaneysaa aaladda AppImageKit si loo dhiso codsiyada ka soo xoq qaab ahaan .Qaar. Dhanka kale, si loo dhiso (loo beddelo) codsiyada AppImage ee kuwa kale oo horeyba loogu abuuray qaabab kale, adeegso aaladda Pkg2 dib u eegis.
Xaaladdayda gaarka ah, tan iyo markii aan doonayay inaan dhiso a .Qaar ee dalabka Baakad raadsade 7.xx, Waxaan sii waday isticmaalka nidaamka lagu sharaxay Keydka GitHub ee Konradmb ee kuyaala Pkg2appimage iyo Packet Tracer.
Isticmaalka Pkg2 dib u eegis
Iyo sida uu qoraagu yidhi, waxaan ku dhaqaaqay anigoo fulinaya talaabooyinka soo socda iyaga oo amraya amarrada kala ah:
Kaydinta faylka .yml ee Bakhaarka 'Packet Tracer'
Soo dejiso qalabka Pkg2appimage oo ka dhig mid la fulin karo
Cusboonaysii waxyaabaha ku jira .yml faylka waddo cusub oo feyl lagu soo dejinayo Baakad-baaremaaddaama waddada soo dejinta hadda aysan ku jirin faylka. Ujeedadaas awgeed, tifaftiraha nano console ayaa loo isticmaali karaa sida soo socota:
Marka waa inay noqotaa faallo (ku jooji #) xariijinta gabowday oo gal midda saxda ah, hal saf sare sida soo socota:
Dhis xirmada .Qaar del Baakad-baare ku xusan .yml faylka
E.- Tallaabada 5
Xirmada xir .Qaar del Baakad-baare dhisay. Isku mid, haddii ay dhacdo in wax walba si sax ah loo fuliyay, waa inuu ku jiraa jidka:
"/ guriga / $ USER / PacketTracer-AppImage / out /"
Oo markii lagu fuliyo, waxaad awoodi doontaa inaad muuqato app AppImage cusub dhib la'aan, sida hoos ka muuqata:
Kooxda MX Linux 19.1 (Ku saleysan Debian 10 - Buster)
Kooxda GNU / Linux Debian 10 (Buster)
Casharradan ka dib iyo tijaabooyin iyo khaladaad qaar ka dib, waxaan rajaynayaa in qaar badani dhisi karaan barnaamijyadooda .Qaar isticmaalka Pkg2 dib u eegis.
Waxaan rajeyneynaa tan "waxtar yar post" ku saabsan «Pkg2appimage», qalab loogu talagalay in lagu abuuro faylasha rakibaadda codsiyada ku jira qaabka AppImage isticmaalka faylasha binary (tar.gz, .deb ama .ppa) jira iyo a Faahfaahinta faylka .yml si loo gaaro beddelaad; noqo wax badan dan iyo utility, Dhammaan «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» iyo wax ku biirinta baahinta ee nidaamka deegaanka ee cajiibka ah, weyn iyo sii kordhaya ee «GNU/Linux».
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Pkg2appimage: Sidee loo dhisaa faylalkayaga AppImage?
Qoraal aad u wanaagsan! Waan ku faraxsanahay inaan arko in bulshada luuqada Isbaanishka ku hadasha ee Linux ay xiiseynayaan qaabka AppImage. Waxaan jeclaan lahaa in aan wax ku daro. Qalabka pkg2appimage waa waqti hore wuxuuna leeyahay cilado qaar. Tan ugu caansan waa xirmooyinka ka soo baxay looma adeegsan karo qaybinta leh glibc ka hooseeya nidaamkii loo abuuri jiray. Tani waa sababta loo soo saaray qalab kale oo ka karti badan.
dhise-dhise (https://appimage-builder.readthedocs.io) sida pkg2appimage wuxuu u adeegsadaa faylka yml qaabeynta. Dukumiintiyada waxaad ka heli kartaa cashar ku saabsan sida loo isticmaalo. Dabcan marwalba waad waydiisan kartaa, si farxad leh ayaan u cadeyn lahaa wixii su'aalo ah.
Alexis Lopez Zubieta sawir-qaade boos
Ku-biiriyaha mashruuca AppImage
Ku jawaab azubieta
Salaan Alexis! Aad baad ugu mahadsantahay faalladaada wanaagsan ee ku saabsan maqaalka. Waxaan rajeyneynaa inaan si dhakhso leh uga qoro maqaal ku saabsan aaladda aad kugula talineyso inay tahay mid ka casrisan pkg2appimage. Inta soo hartay, Guul, caafimaad iyo ducooyin badan oo adiga, iyo qof kasta oo kale oo ku jira mashruuca AppImage.
YT ka weyn dijo
Saaxiibayaal Waxaan idiin sheegayaa in aan waayo-aragnimo aan fiicnayn ku soo qaatay qaabka .appimage, waxaan idiin sheegayaa, dhawr maalmood ka hor ayaan rakibay balena etcher (KDE Neon-kayga) oo nasiibdarro aniga hadda ii timaadda oo keliya qaabkan qaabkeeda Linux. Waan rakibay, waan isticmaalay waana tirtiray, waa halka ay dhibaatadu ka bilaabatay, guriga waxaan ku abuuraa galka la yiraahdo Codsiyada xitaa haddii aad tirtirto, dib ayaa loo sameeyaa dib u bilaabid kasta. Waxay qaadataa in ka badan hal maalin in la helo faylasha qarsoon ee la abuuray adiga oo aan oggolaansho lagaa helin markii aad mid socoto. appimage. Aniga ahaan qaabkani wuxuu uga egyahay fayras nooc kale oo barnaamij ah. Mar labaad kaftami maayo inaan ku rakibo wax kale qaabkan.
Jawaab Viejuber YT
Salaan Viejuber YT! Waa ceeb. Waxaan ku rakibay / rakibay Balena AppImage dhibaato la'aan, runtiina ma rumaysnayn in AppImage uu yahay hindise xun ama hindise si xun loo hirgeliyay. Waa inaad inbadan isku daydaa inaad aragto sida ay wax u socdaan ...
Waxaan kuugu hambalyeynayaa qoraalkan. Waxaan sidoo kale waalanayay anigoo isku dayaya inaan helo PacketTracer oo ku socda LMDE4 (Debian 10)
Aniga oo raacaya tilmaamaha waxaan ku guuleystey PacketTracer 7.2.1 laakiin wey sii burbureysaa hadaan isku dayo 7.3.0 isla dhibaatooyinka ku tiirsanaanta sida libjpeg.so.8 iyo qaar kaloo badan.
Mahadsanid iyo salaan.
Salaan Javi42! Waad ku mahadsantahay faallooyinkaaga, waxaan ku faraxsanahay in qoraalka uu waxtar kuu yeeshay.
Weli waxay sugeysaa inay hesho si ay ula shaqeyso Furitaanka: Waxaan isku dayay sameynta .desktop u dhigma laakiin ma qabato doodda% f,% F ama% U si fiican si ay u furto feylka loo gudbiyay halbeeg ahaan.